Maamulka G. Banaadir oo yeeshay Afhayeen cusub – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 18 April 2015 19 April 2015
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Xasan Maxamed Xuseen (Muungaab) ayaa afhayeenka cusub ee gobolka Banaadir u magacaabay Cabdifataax Cumar Xalane, oo ahaa agaasimaha waaxda warfaafinta ee gobolka.
Wareegto kasoo baxda xafiiska guddoomiyaha ayaa maanta lagu sheegay in xilka afhayeennimo laga qaaday Cali Maxamuud Faarax (Cali Seeko) loona magacaabay Cabdifataax Cumar Xalane.
Wareegtada oo ku saxiixnaa guddoomiyaha gobolka ayaa lagu sheegay in Muungaab markii uu arkay baahida loo qabo dar-dargelinta howlaha warfaafinta ee gobolka Banaadir uu magacaabay afhayeenka cusub, isagoo u rajeeyay inuu kasoo baxo shaqada loo igmaday.
Cali Maxamuud Faarax (Cali Seeko) ayaa xilka afhayeennimo loo magacaabay bishii July ee sanadkii hore.
Muqdisho: Xildhibaan ka tirsan maamulka Punland oo la dilay